UAE နိုင်ငံရောက်မြန်မာများ၏ 2012 သင်္ကြန်ပုံရိပ်များ...! | အိမ်လွမ်းသူ...
UAE နိုင်ငံရောက်မြန်မာများ၏ 2012 သင်္ကြန်ပုံရိပ်များ...!
အမိမြေနှင့်ဝေးနေပေမဲ့ ဒီအချိန်ရောက်ရင် မြန်မာလူမျိုးများရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ဖုံးဖိလို့ မရနိုင်တာကတော့ နှစ်ကူးတဲ့ သင်္ကြန်ကာလလေးပါပဲ...!တူးပို့တူးပို့ ဆိုတဲ့အသံကြားရင် ဘယ်လိုမှ စိတ်တွေ ထိန်းလို့မရတော့ဘူး...!ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသတွေပဲရောက်ရောက် မြန်မာတိုင်းဟာ သင်္ကြန်ပွဲလေးကို ဖြစ်မြှောက်အောင်ဆင်နွှဲ ကြစမြဲပါ...!UAE နိုင်ငံရောက်ရွှေမြန်မာတွေကလည်း ကိုယ်နေရာ၊ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာ သင်္ကြန်ပွဲလေးတွေကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်...! သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ JUMEIRAH BEACH PARK မှာကျင်းပတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲလေးဆိုရင် အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်ပါတယ်...!ဒီပွဲလေးကိုဖြစ်မြှောက်အောင် စိတ်ကူးကောင်းလေးဖြင့် အကောင်ထည်ဖော်သူတွေကတော့ ကိုကျော်ကျော်ဝေ ၊ကိုကျော်ကျော်ထိုက်၊ ကိုလင်း၊ ကိုကြည်လွင်ဦး၊ ကိုပြေငြိမ်း၊ ကိုကျော်ထွန်း၊ မသန္တာ၊ မထက်ထက်နှင့်သူငယ်ချင်းအပေါင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်...!
ကြွေးမွေးတဲ့နေရာမှာလည်း လာရောက်တဲ့လူတွေကို တမျိုးပြီးတမျိုး မရိုးနိုင်အောင်ပါပဲ...!ဒီပွဲလေးဟာဆိုရင်ဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲထက် အလှူပွဲလေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး...!လာရောက်ကျတဲ့ လူတွေကလည်း ကျွန်တော့်အထင် လူပေါင်3း00ထက်မနည်းဘူလို့ ခန့်မှန်းမိတယ်...!အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလေးပါပဲ...!အစားသောက်တွေကလည်း ကြာဇံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ပေါင်မုန့်အုန်းနို့ဆမ်း၊ ဆီထမင်း+ငါးခြောက်ကြော်၊ မုန့်လုံးရေပေါ်နှင့်ငှက်ပျေားသီးဆနွင်းမကင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်...!အိမ်း...ကျွန်တော်လေများမနေတော့ပါဘူး...!ဓါတ်ပုံတွေသာ ခံစားကြည့်ပေတော့...
6 Response to UAE နိုင်ငံရောက်မြန်မာများ၏ 2012 သင်္ကြန်ပုံရိပ်များ...!
မိုက်တယ်.. အဝေးရောက်နေပေမယ့် သင်္ကြန်ကို ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အတူတူ ပျော်ခွင့်တော့ ရခဲ့တာပဲနော် ကောင်းလိုက်တာ :)
မုန့်နဲနဲတွေ့တယ် နဲနဲယူစားသွားတယ် ဟိ